Rugby – «Can 2019»: misy mpilalao any Angletera ao amin’i Nizeria | NewsMada
Rugby – «Can 2019»: misy mpilalao any Angletera ao amin’i Nizeria
Efa ao anatin’ny fanomanantena tanteraka, hiatrehana ny Black Stallions-n’i Nizeria, ny Makis de Madagascar, amin’izao fotoana izao. Lalao, hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Can 2019”, taranja rugby.
Afaka 20 andro eo, no handray an-dry zareo Nizerianina, etsy amin’ny kianjaben’ny Mahamasina, ny Malagasy. Ekipa tsy dia goavana loatra aty Afrika ary mbola any aorian’ny Makis raha eo amin’ny laharana eran-tany, no misy ny Nizerianina, saingy kosa misy mpilalao maro avy any Eoropa, mandrafitra azy ireo. Misy ireo milalao any Angletera sy Portugal ary Alemaina sy Etazonia. Eo koa ireo avy atsy Afrika Atsimo. Na izany aza, tsy mbola misongadina aty Afrika izy ireo. Tany aorian’ny Makis, nandritra ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, teo amin’ny rugby lalaovina olona fito, natao tatsy Afrika Atsimo, farany teo.
Manam-batana kosa nefa ireto Nizerianina ho avy hanafika ny Makis de Madagascar, ireto. Manodidina ny 25 ny salan-taonan’izy ireo. Na izany aza, tsy mbola manana traikefa loatra ry zalahy, eo amin’ny fifaninanana iraisam-pirenena. Mila fahamailoana ihany anefa ho an’ny Makis de Madagascar, satria tsy mitsahatra ny mivoatra ny rugby aty Afrika. Hanana ny lanjany lehibe io fihaonana io satria tafita hiatrika ny lalaom-bondrona, izay tafavoaka ho mpandresy eo amin’ny roa tonta. Manana ny tombony ny Makis de Madagascar, hilalao eto an-kianjany, ary manoloana ireo mpijeriny. Anisan’ny zavatra tsara ho an’ny Makis de Madagascar, ihany koa ny fahalehibiazan’ny kianja hilalaovana. Raha ny vaovao voaray mantsy, tsy zatra manao baolina amin’ny kianja goavana, ny Stallions Nizeria. Na izany aza, mila ny fanohanan’ny rehetra ny Makis de Madagascar.